ब्राजिलमा फुटबल हेर्नेकाे संख्या घट्दाे, राेनाल्डाे बने साेसियल मिडियाकाे राजा | | Neplays.com
ब्राजिलमा फुटबल हेर्नेकाे संख्या घट्दाे, राेनाल्डाे बने साेसियल मिडियाकाे राजा
विश्व फुटबलमा सबै भन्दा फुटबलका लागि क्रेजी दर्शक भएको देश भनेर चिनिने ब्राजिलको सो रेसियो निकै घट्दो क्रममा रहेको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टले ब्राजिलियनहरुको फुटबल प्रतिको चासो ६० प्रतिशतमा घटेको छ ।
नेल्सन स्पोर्टसले गरेको सर्भेमा शिर्ष ३० देशका समर्थकसँग कुरा गर्दा युएई शिर्ष स्थानमा पुगेको छ । पछिल्लो पटक सो देशका जनता फुटबलप्रति निकै चासो दिन थालेका छन । युएईमा ८० प्रतिशतले फुटबलमा चासो दिने गरेको पाइएको छ भने थाइल्याण्डमा ७८ प्रतिशत, चिली, पोर्चुगल, टर्किमा समान ७५ प्रतिशत जनताले फुटबलमा चासो दिइएको पाइएको छ ।
५ पटकको विश्व च्याम्पियन ब्राजिलमा भने दिनानुदिन समर्थकहरु फुटबल प्रतिको क्रेजलाई कम गर्दै गएको सो रिपोर्टले जनाएको छ । सर्वाधिक फुटबलमा चासो दिने देशमा ब्राजिल १३ औं स्थानमा पुगेको छ । जवकी कुनै समय ब्राजिल विश्वमा धेरै फुटबल क्रेज भएको देश मानिन्थ्यो । सन् २०१३ देखि त झन यसको फिजर ७२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसको अर्को बर्ष घरेलु मैदानमा ब्राजिल जर्मनीसँग सात एकले हारेपछि झन उसका समर्थक विक्षिप्त भएका थिए ।
ब्राजिलमा फुटबल क्रेज कसरी घट्दै छ भनेर स्थानिय प्रतियोगितामा दर्शकको उपस्थितीले पनि जनाएको छ । पछिल्लो एक बर्षमा ब्राजिलका घरेलु प्रतियोगितामा धेरै दर्शक भनेको १६ हजार ४ सय १८ जना रहेको छ । एशियाली देशमा पनि चीनमा फुटबल प्रतिको चासो २७ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा पुगेको छ भने भारतमा ३० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यस्तै अमेरीकामा २८ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा फुटबलप्रति चासो राख्ने समर्थकको सख्या बढेको छ ।
सोसियल मिडियामा क्रिस्टियानो रोनाल्डोका बारेमा धेरै खोजिएको तथ्यांकले देखाएको छ । उसको फेसबुक, ट्विटर र इन्टामा कुल ५ सय ७० मिलियनले हेर्ने गरेको देखिएको छ भने नेइमारको दुई सय ९४ र मेसीको २०१ मिलियन सपोर्टरले फलो गरेको देखिएको छ ।
नाेर्विच रेलिगेसनकाे स‌ङ्घारमा
थिएगाेले बार्यन छाेड्ने
जाभी बार्सिलाेनाकाे प्रशिक्षक हुन तयार !
मेस्सीले बार्सिलाेना छाेडे राेनाल्डाे र उनलाई एउटै क्लवमा देख्न पाइएला ?
आर्सनललाई फिफाले लगायाे जरिवाना
एट्लेटिको मड्रिडको अपराजित यात्रा कायमै